အိမ်လုပ်တစ်အိုး Cheeseburger Macaroni (Stove Top) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
chow mein နှင့် chop suey အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ
cranberries နှင့် walnuts နှင့်အတူပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းသုပ်
အိမ်လုပ်တစ်အိုး Cheeseburger Macaroni (Stove Top)
အိုကေ၊ မင်းငါ့ကိုသိဖို့လိုတာတစ်ခုရှိရင်ငါ macaroni နဲ့ဒိန်ခဲကို ၃ ကြိမ်၊ တစ်နေ့ ၇ ရက်စားလို့ရတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း .. ထာဝရ
နှင့် .. ငါ boxed ကြင်နာ LOVE ငါ Hamburger ကူညီချစ်ကြတယ်။ မီးဖိုချောင်၊ အိမ်လုပ်၊ ဖုတ်ထား၊ ချက်ပြုတ်၊ နှေး၊ ချက်ပြီး၊ ဘူး၊ အေးခဲနေသောအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ထိပ်ဆုံးနှစ်ခုပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါဟာထဲမှာပါပဲ ငါ၏အထိပ်2(ငါ့နှင့်အတူ Ultra Creamy အနှေး Cooker Mac နှင့်ဒိန်ခဲ ) !! ဒါက wow ဆိုလိုတာကဒါဟာစူပါကြောက်မက်ဘွယ်ပဲ! ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါဟာ Hamburger Helper သေတ္တာလေးနဲ့အရမ်းနီးကပ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ဒီစာရွက်မှာပါ ၀ င်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုသင်သိတယ်။
အကောင်းဆုံးအပိုင်းကမိနစ် ၂၀ အစပြုသည်။
Cheeseburger Macaroni (မီးဖိုထိပ်)
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၂ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၂၈ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ စာရေးသူHolly Nilsson မိနစ် ၃၀ စာအဆုံးကိုစတင်ရန်ကြိုးစားပြီးနောက်တွင်သင်သည်သေတ္တာမျိုးကိုဘယ်သောအခါမှမဝယ်တော့ပါ။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ ခွက် ကြက်သားဟင်းရည် သို့မဟုတ်ရေ
▢1 ½ ခွက် uncooked macaroni ခေါက်ဆွဲ
▢၁ ဇွန်း ပြောင်းဖူး
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ခုချင်းစီကိုကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်, ​​သကြားနှင့် paprika
▢1 ½ ခွက် ချွန်ထက်သော cheddar ဒိန်ခဲ
သေးငယ်သောပန်းကန်လုံးတွင်ပြောင်းဖူး၊ ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်၊ သကြား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ဘေးဖယ်ထားပါ။
အမဲသားတွင်နို့၊ ဟင်းရည်နှင့်မာကရိုနီတို့ကိုထည့်ပါ။ ပြောင်းဖူးနှင့်အမွှေးအကြိုင်အတွက်နှိုးဆော်။ ဆူအောင်တည်ထားပါ။ အပူကိုလျှော့ချပြီး ၉-၁၂ မိနစ်ခန့်ဖုံးအုပ်ထားပါ။
သော့ချက်စာလုံးcheeseburger macaroni သင်တန်းညစာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။